Mpanamboatra fonosana fonosana plastika Q-pack Wholesale sy mpamatsy | Zhongtai
Kitapo plastika Q izay azo ampiasaina amin'ny fomba fitsaboana rano be azo amidy betsaka, toy ny:
Fitsaboana mialoha ny famoahana desalination
Fitsaboana rano fisotro
Ny habetsahan'ny mason-koditra Q-pack sy ny velarantany dia mahatonga azy io ho media tsara indrindra amin'ny fitsaboana biolojika amin'ny rano fisotro. Ny fizotry ny sarimihetsika biolojika dia tsara indrindra amin'ny fitsaboana rano tsy misy fatrany amoniaka, manganese, vy sns. Amin'ny dingan'ny filtration mahazatra Q-pack dia azo ampiasaina amin'ny fomba samihafa Ao amin'ny sivana haino aman-jery roa dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fasika ny Q-pack. Nasehon'ny fitsapana fa ny Q-pack dia miasa ihany koa na tsara kokoa noho ny haino aman-jery sivana nentim-paharazana amin'ireo karazana sivana ireo. Q-pack dia tsy azo ampiasaina amin'ny fitsaboana rano fisotro nentim-paharazana, fa amin'ny fitsaboana rano masira koa. Ao amin'ny zava-maniry desalination dia iray amin'ireo singa manan-danja indrindra dia ny fizotran'ny fitsaboana. Q-pack dia haino aman-jery sivana tsara indrindra ampiasaina amin'ny sivana mialoha ny fitsaboana amin'ny zavamaniry fanamainana.
Famaritana ara-teknika ny Q-Pack
Lasely Intalox plastika
82,5 * 95
Ireo fonosana tilikambo plastika isan-karazany ireo dia be mpampiasa amin'ny solika sy ny simika, ny klôroza alkaly, ny etona ary ny fiarovana ny tontolo iainana miaraka amin'ny max. mari-pana ny 150 °.
Toetoetra ara-batana sy simika an'ny Q-Pack
Teo aloha: PP plastika volom-borona mararin'ny plastika
Manaraka: Tower fonosana rano fikolokoloana rano Ball Igel